DAAWO:Xasuusta 10 sano kaddib Qaraxii Hotelka Shaamow ee magaalada Muqdisho – KHAATUMO NEWS
DAAWO:Xasuusta 10 sano kaddib Qaraxii Hotelka Shaamow ee magaalada Muqdisho
Waxey aheyd maalin murugo badan oo xasuus ku reebtay Qalbiyada bulshada Soomaaliyeed meel kasta oo ay joogaan 03 bishii December, 2009 maanta oo kale ka dhacay Hotelka Shaamow ee magaalada Muqdisho munaasabad ay ku qalin jabinayaan Ardey Soomaaliyeed oo u badnaa dhakhaatiir ka baxday Jaamacadda Banaadir.
Dadka maalintaa ku dhintay Qaraxa ka dhacay gudaha Hoolka ay ka soctay Munaasabada waxaa ka mid ahaa Ardeydii Qalinjabineysay, Macallimiinta Jaamacadda Banaadir qaarkood, Waalidiin iyo Xubno ka socdey dowladii waqtigaa jirtay oo u badnaa Wasiirro.
Waxaa sidoo kale Qarax ku dhaawaacmay inta badan dadkii munaasabada ku sugnaa oo ka badbaaday in ay ku dhintaan Qaraxa oo ahaa mid siweyn loo soo qorsheeyay.
Qofka weerarka ismiidaaminta ah geystay ayaan la ogeyn sida uu xiligaan ku soo galay gudaha Hoolka ay munaasabada ka soctay oo Amaanka siweyn loo adkeeyay maadama ay ku sugnaayeen Wasiirro ka socda Federaalka oo watay ilaalo xooggan oo ku sugnaa dibadda hoteelka.
Qaraxa Hotelka Shaamow waxaa ka horeeyay kii bishii June ee isla sanadkaa 2009ka ka dhacay magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan oo ay ku dhinteen dad ku dhaw 70 ruux oo ay ka mid ahaayeen Wasiirkii Amniga Dowladdii KMG ee waqtigaa jirtay Cumar Xaanshi Aadan iyo Danjirihii Soomaaliya iyo Itoobiya Cabdikariin Faarax Laqanyo.
Previous Post: Deg Deg Dhagayso,:kenya iyo Jubaland Oo wada Qorshe Layaab Ku Noqday Beesha Gedo,
Next Post: Daawo:Sheekh Soomow “‘Ina Cabdi Shakuur waa inuu si deg deg ah u towbad keenaao’